လေဖြတ်ဝေဒနာ ခံစားနေရတဲ့ ဦးကမ္ဘာကျော်ကို သွားရောက်လှူဒါန်းမယ့် ခင်လှိုင်တို့ ဇဝနဖောင်ဒေးရှင်း - 9style
Home/နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ/လေဖြတ်ဝေဒနာ ခံစားနေရတဲ့ ဦးကမ္ဘာကျော်ကို သွားရောက်လှူဒါန်းမယ့် ခင်လှိုင်တို့ ဇဝနဖောင်ဒေးရှင်း
လေဖြတ်ဝေဒနာ ခံစားနေရတဲ့ ဦးကမ္ဘာကျော်ကို သွားရောက်လှူဒါန်းမယ့် ခင်လှိုင်တို့ ဇဝနဖောင်ဒေးရှင်းသူတတ်ကျွမ်းတဲ့ အနုပညာနဲ့ ပရိသတ်တွေကို အကောင်းဆုံး ပေးဆပ်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင်ကတော့ သူတို့ ဟာသသရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ခက်ခဲမှုတွေကို
လက်တွေ့ကျကျကူညီပေးနေတဲ့ စိတ်ဓါတ်ပြည့်ဝသူတစ်ဦးပါ။ လတ်တလောမှာတော့ ခင်လှိုင်က လေဖြတ်ဝေဒနာ ခံစားနေရတဲ့ ဟာသပညာရှင်ကြီး ဦးကမ္ဘာကျော်ကိုသွားရောက်ကူညီ လှူဒါန်းသွားဖို့ရှိတဲ့အကြောင်း လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းတဲ့အပြင်
အလှူရှင်တွေကိုပါ စုစည်းပေးနိုင်တဲ့ ခင်လှိုင်ကတော့ တကယ့်ကို လေးစားစရာ ကောင်းတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါပဲနော်။ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အရမ်းကို စိတ်ထားကောင်းပြီး၊ အနုပညာရှင် အချင်းချင်း ပြန်ကြည့်တတ်တဲ့ ခင်လှိုင်ရဲ့မွန်မြတ်တဲ့ စိတ်ထားလေးအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ခင်လှိုင်ကတော့ “ကျွန်တော်လေးစားချစ်ခင်ရသော ချစ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ ဇ၀န ဖေါင်ဒေးရှင်းရဲ့ သက်ကြီးဟာသပညာရှင်ကြီးများကျမ္မာရေးစောင့်ရှောက်ရန်အတွက် ရန်ကုန် မန္တလေး မြို့မှ ၆၅ နှစ်ပြည့်ပြီးသော သက်ကြီးဟာသပညာရှင်ကြီးများကိုလစဉ်မဲစနစ်ဖြင့်လှူဒါန်းခဲ့တာ ၇ ကြိမ်တိုင်ခဲ့ပါပြီ
၁. ၉.၂၀၁၉ နေ့က မဲနှိုက်ရွေးခြယ်ခဲ့ရာ ရန်ကုန်မြို့မှ လူရွှင်တော်ကြီး ဦးကမ္ဘာကျော် ကံထူးခဲ့ပါတယ် ဟာသပညာရှင်ကြီး ဦးကမ္ဘာကျော်ဟာ လွန်ခဲ့သောနှစ်လကမှ
လေဖြတ်ဝေဒနာကိုခံစားနေရသူဖြစ်ပါတယ် ဒီလအတွက်ကျွန်တော်တို့ ဇဝန ဖေါင်ဒေးရှင်းနှင့်အတူလစဉ် ပါဝင်လှူဒါန်းကြသောစေတနာရှင်အလှူရှင်များကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဦးကမ္ဘာကျော်နေထိုင်သော ရွှေပြည်ယာမြို့နယ်ရှိနေအိမ်သို့ ၅.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တွင်ကျွန်တော်တို့သွားရောက်ကန်တော့ပါမယ်ခင်ဗျာ လိုက်ပါချင်သူများပါဝင်လှူဒါန်းချင်သူများ ၅ ရက်နေ့
မနက် 9:00မှာကျွန်တော့်အိမ် သုဝဏမှစတင်ထွက်ခွါပါမည် ယ္ခုလက်ရှိအလှူငွေကတော့ ၉၇၅၀၀၀ …၉သိန်း ၇သောင်း ၅ထောင် ရရှိပါပြီ အလှူရှင်ကြီးများကို
ခင်ဗျာ ပါဝင်လှူဒါန်းလိုသူများ 095501366 ကိုဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ 🙏🙏🙏” ဆိုပြီး လှူချင်တဲ့သူတွေရှိရင်လည်း အဆင်ပြေအောင် လူမှုကွန်ယက်မှာ တင်ထားတာပါ။
ခင်လှိုင်ကတော့ သူ့ရဲ့ဇဝနဖောင်ဒေးရှင်းမှာ လစဉ် လှူဒါန်းနေတဲ့ အလှူရှင်တွေရဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့အတူ လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာပါ။
သရုပ်ဆောင်ခင်လှိုင်ကတော့ ဟာသရော၊ ဒရာမာရော ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် အနုပညာလောကမှာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာအောင်အောင်မြင်မှုတွေ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ခင်လှိုင်က ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးဖြစ်နေပြီး၊သားသမီးတွေကိုလည်း အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ် တင်ပေးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။Credit- မိုမိုလေး
လဖွေတျဝဒေနာ ခံစားနရေတဲ့ ဦးကမ်ဘာကြျောကို သှားရောကျလှူဒါနျးမယျ့ ခငျလှိုငျတို့ ဇဝနဖောငျဒေးရှငျး
သူတတျကြှမျးတဲ့ အနုပညာနဲ့ ပရိသတျတှကေို အကောငျးဆုံး ပေးဆပျနတေဲ့ သရုပျဆောငျ ခငျလှိုငျကတော့ သူတို့ ဟာသသရုပျဆောငျတှရေဲ့ခကျခဲမှုတှကေို
လကျတှကေ့ကြကြူညီပေးနတေဲ့ စိတျဓါတျပွညျ့ဝသူတဈဦးပါ။ လတျတလောမှာတော့ ခငျလှိုငျက လဖွေတျဝဒေနာ ခံစားနရေတဲ့ ဟာသပညာရှငျကွီး ဦးကမ်ဘာကြျောကို
သှားရောကျကူညီ လှူဒါနျးသှားဖို့ရှိတဲ့အကွောငျး လူမှုကှနျယကျမှာ ဝမြှေပေးထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ သူကိုယျတိုငျလညျး တတျနိုငျသလောကျ လှူဒါနျးတဲ့အပွငျ
အလှူရှငျတှကေိုပါ စုစညျးပေးနိုငျတဲ့ ခငျလှိုငျကတော့ တကယျ့ကို လေးစားစရာ ကောငျးတဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးပါပဲနျော။
ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ အရမျးကို စိတျထားကောငျးပွီး၊ အနုပညာရှငျ အခငျြးခငျြး ပွနျကွညျ့တတျတဲ့ ခငျလှိုငျရဲ့မှနျမွတျတဲ့ စိတျထားလေးအကွောငျးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
ခငျလှိုငျကတော့ “ကြှနျတျောလေးစားခဈြခငျရသော ခဈြမိတျဆှအေပေါငျးတို့ခငျဗြာ ကြှနျတျောတို့ ဇဝန ဖေါငျဒေးရှငျးရဲ့ သကျကွီးဟာသပညာရှငျကွီးမြား
ကမ်ြမာရေးစောငျ့ရှောကျရနျအတှကျ ရနျကုနျ မန်တလေး မွို့မှ ၆၅ နှဈပွညျ့ပွီးသော သကျကွီးဟာသပညာရှငျကွီးမြားကိုလစဉျမဲစနဈဖွငျ့လှူဒါနျးခဲ့တာ ၇ ကွိမျတိုငျခဲ့ပါပွီ
၁. ၉.၂၀၁၉ နကေ့ မဲနှိုကျရှေးခွယျခဲ့ရာ ရနျကုနျမွို့မှ လူရှငျတျောကွီး ဦးကမ္ဘာကြျော ကံထူးခဲ့ပါတယျ ဟာသပညာရှငျကွီး ဦးကမ္ဘာကြျောဟာ လှနျခဲ့သောနှဈလကမှ
လဖွေတျဝဒေနာကိုခံစားနရေသူဖွဈပါတယျ ဒီလအတှကျကြှနျတျောတို့ ဇဝန ဖေါငျဒေးရှငျးနှငျ့အတူလစဉျ ပါဝငျလှူဒါနျးကွသောစတေနာရှငျအလှူရှငျမြားကြေးဇူးအထူးတငျပါတယျခငျဗြာ
ဦးကမ္ဘာကြျောနထေိုငျသော ရှပွေညျယာမွို့နယျရှိနအေိမျသို့ ၅.၉.၂၀၁၉ ရကျနေ့ တှငျကြှနျတျောတို့သှားရောကျကနျတော့ပါမယျခငျဗြာ လိုကျပါခငျြသူမြားပါဝငျလှူဒါနျးခငျြသူမြား ၅ ရကျနေ့
မနကျ 9:00မှာကြှနျတေျာ့အိမျ သုဝဏမှစတငျထှကျခှါပါမညျ ယ်ခုလကျရှိအလှူငှကေတော့ ၉၇၅၀၀၀ …၉သိနျး ရသောငျး ၅ထောငျ ရရှိပါပွီ အလှူရှငျကွီးမြားကို
ကြေးဇူးတငျဂုဏျပွု တငျပွအပျပါတယျခငျဗြာ ပါဝငျလှူဒါနျးလိုသူမြား 095501366 ကိုဆကျသှယျလှူဒါနျးနိုငျပါတယျခငျဗြာ 🙏🙏🙏” ဆိုပွီး လှူခငျြတဲ့သူတှရှေိရငျလညျး အဆငျပွအေောငျ လူမှုကှနျယကျမှာ တငျထားတာပါ။ခငျလှိုငျကတော့ သူ့ရဲ့ဇဝနဖောငျဒေးရှငျးမှာ လစဉျ လှူဒါနျးနတေဲ့ အလှူရှငျတှရေဲ့ပုံရိပျတှနေဲ့အတူ လူမှုကှနျယကျမှာ ဝမြှေပေးထားတာပါ။
သရုပျဆောငျခငျလှိုငျကတော့ ဟာသရော၊ ဒရာမာရော ပိုငျနိုငျကြှမျးကငျြတဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးဖွဈတာကွောငျ့ အနုပညာလောကမှာ နှဈပေါငျးအတျောကွာအောငျအောငျမွငျမှုတှေ ထိနျးသိမျးထားနိုငျတဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။ လတျတလောမှာတော့ ခငျလှိုငျက ရုပျရှငျဇာတျကားတှေ ဆကျတိုကျရိုကျကူးဖွဈနပွေီး၊သားသမီးတှကေိုလညျး အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါ တငျပေးနတော တှရေ့ပါတယျ။Credit မိုမိုလေး
မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဝတ်စုံကို သရုပ်ပျက်ဝတ်ဆင်မှုကြောင့် အရေးယူခြင်းခံရတော့မယ် ဆယ်လီတစ်ဦး
“အထက်တန်းစား” ရုပ်ရှင် ထဲမှာ အငယ်လေး ဇာတ်ရုပ်ပြီပြင်ဖို့ လုံးဝပြောင်းလဲခဲ့ရတဲ့ သူရိယ